Union Minister U Kyaw Tin attends Informal ASEAN-US Ministerial Meeting – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for International Cooperation U Kyaw Tin, who has already arrived in New York, the United States to attend the 73rd General Assembly of the United Nations, attended the Informal ASEAN-US Ministerial Meeting at Lotte Hotel in New York yesterday afternoon.
During the meeting, Lao Prime Minister Saleumxay Kommasith and United States Deputy Secretary of State John J. Sullivan acted as chairpersons. They discussed promoting bilateral relations between ASEAN-Myanmar along with exchanging views on local and international issues.
အာဆီယံ-အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေးသို့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ တက်ရောက်ရန် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက်မြို့သို့ ရောက်ရှိနေသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၂၇-၉-၂၀၁၈ ရက်၊ ဒေသစံတော်ချိန် ၁၄၀ဝ နာရီတွင် နယူးယောက်မြို့ရှိ Lotte ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ-အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ၏ အလွတ်သဘော အစည်းအဝေး (Informal ASEAN-US Ministerial Meeting) သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အစည်းအဝေးတွင် လာအို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Saleumxay Kommasith နှင့် အမေရိကန် ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး John J. Sullivan တို့က ပူးတွဲ သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကာ အာဆီယံ-အမေရိကန် မဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။